Dastabej » नाला पनि प्लटिङ, नेपालगन्ज उपमहानगर बेखबर
नाला पनि प्लटिङ, नेपालगन्ज उपमहानगर बेखबर – Dastabej
नाला पनि प्लटिङ, नेपालगन्ज उपमहानगर बेखबर
नेपालगन्जमा १ सय ३२ विगहा सरकारी पर्ती जग्गा छ । त्यस्तै ७० विगहा पोखरी, ६ कठ्ठा मन्दीर र ३ सय ३८ विगहा जंगल क्षेत्रको जग्गा छ । ति सबैजसो सरकारी जग्गामा केही न केही अतिक्रमण भएका छन् ।
नेपालगन्ज— नेपालगन्जको धम्बोझी चोकदेखि करिव एक किलो मिटर पश्चिम तर्फ डेन्टल अस्पताल नजिकै गुलरिया राजमार्गको पानी निकासका लागि एक वर्षअघिसम्म ठूलो नाला थियो । नालामा अझै पनि कल्भर्ट छ । तर हाल उक्त नाला पुरेर पलटिङ गरिएको छ । उक्त जग्गा कसको हो ? उपमहानगरलाई जानकारी छैन । बर्षामा नेपालगन्जको पानी निकास हुने उक्त नाला उत्तर तर्फबाट पुरिदै आएपछि अतिक्रमणमा परेको हो । उक्त नालाको अस्तित्व नै सकिनै थालेको छ । नेपालगन्जको बासपार्क क्षेत्रमा पनि सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेका छन् । सरकारी जग्गामा ठूलाठूला महलहरु ठडाइएका छन् । तालतलैया, सार्वजनिक पर्ती जग्गा, मन्दीर र जंगल लगायतका सबैजसो क्षेत्रका जग्गाहरु अतिक्रमणमा परेका हुन । नेपालगन्ज उपमहानगरको नगर परिषदले सार्वजनिक जग्गामा तारबार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर निर्णय भइसकेको लामो समय बितिसक्दा पनि सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको काम सुरु हुन सकेको छैन । उपमहानगरले भने सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राख्न सुरु गरेको छ । त्यसलगत्तै सार्वजनिक जग्गाहरुको संरक्षणका लागि तारबार गरिने उपमहानगर प्रमुख डा. धवलशम्सेर राणाको दाबी छ । उनका अनुसार भूमाफियाहरु सरकारी जग्गा दर्ता गर्न प्रयासमा रहेको बताए । ‘त्यसैले कहाँ कति जग्गा छ त्यो सार्वजनिक गर्न मिल्दैन,’ उनले भने,‘पहिले सरकारी जग्गाको पूर्ण अभिलेख लिन्छौ । त्यसपछि तारबार गरी सरकारी जग्गाको अभिलेख सार्वजनिक गर्छौ ।’ उनका अनुसार मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीहरु पनि सरकारी जग्गाको पछि लागेका छन् ।
२५ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०७:०५ प्रकाशित